စမူဆာကြော်နည်း နှင့် စမူဆာသုပ် | The Restaurant Guides for Myanmar
စမူဆာကြော်နည်း နှင့် စမူဆာသုပ်
စမူဆာသည် တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အလယ်အာရှ၊ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်၊ မြေထဲပင်လယ်၊ တောင်နှင့် မြောက်အာဖရိက ဒေသများတွင် လူကြိုက်များသည့် အဆာသွတ်ကာ ကြော်ထားသော မုန့်ပဲသွားရည်စာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စမူဆာ၏ ပုံသဏ္ဌာန်မှာ တြိဂံပုံစံရှိသည်။ ထို့ကြောင့် တြိဂံပုံစံများကို ဆမူစာပုံဟု သုံးနှုံးပြောဆိုကြသည်။ မြန်မာပြည်မှ စမူဆာမှာ အိန္ဒိယရှိ စမူဆာထက် သေးငယ်ကာ ပိုပြားပြီး တြိဂံပုံစံရှိသည်။
စမူဆာသည် ဟင်ဒီစကားမှ ဆင်းသက်လာသော အမည်ဖြစ်သည်။
ဒီလိုစမူဆာကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ် စားသောက်နိုင်ဖို့အတွက် စမူဆာကြော်နည်း နှင့် စမူဆာသုပ် အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ..
၁_ အာလူးအရွယ်လတ်လတ် ၄ လုံးလောက်ကို ပြုတ်ပြီး အခွံနွာထားပါ.
၂_ မဆလာ ၂ ထုတ်.
၃_ ကြက်သွန်နီ ဥကြီး တစ်ဥ ကို လက်သည်းခွံလောက် အတုံးလေးတွေရအောင်လှီးပြိး ခွာထားပါ.
၄_ ပူဒီနာ(ပူစီနံ) ၄-၅ ခက်ကို ပါးပါးလေးတွေလှီး၊ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက် ၃ - ၄ ခက်ကို ချွေထားပါ.
၅_ ချင်း ပါးပါးလှီးထားတာ ၂ ခု ထောင်းထားပါ.
၆_ ကြက်သွန်ဖြူ ၂ မွှာလောက် ထောင်းထားပါ.
၇_ ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်း.
၈_ နနွင်းမှုန့် အရောင်လှအောင် လက် ၂ ဆိတ်စာလောက်.
၉_ ဆား၊ အချိုမှုန့် အနည်းငယ်.
၁၁_ စမူစာရွက် သို့ spring roll wrapper - ကော်ပြန့်ကြော်လိပ်တဲ့ အရွက် (Super Market တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်)၊ အဝိုင်းထက် လေးထောင့်ကို ရွေးဝယ်ပါ.
၁၂_ ကော်မှုန့်နည်းနည်းကို ရေပျစ်ပျစ် ဖျော်ထားပါ။ (စမူဆာ ခေါက်တဲ့ အခါ နောက်ဆုံးအပိုင်းကို မကွာအောင် ကော်ကပ်သလို ကပ်ဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်၊ မဟုတ်ရင် ကြော်နေတုန်း စမူဆာအပေါ်ဖတ်ကွာပြီး အထဲကအစာတွေ အပြင်ထွက်ကုန်ပါ့မယ်)
ပြုလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့် ..
.. အထက်ပါပစ္စည်းများ အမှတ်စဉ် (၁) မှ (၉) အထိကို ဇလုံတစ်ခုထဲထည့်ပြီး အာလူးကြေသည်အထိ ရောမွေပြီး နယ်ပေးပါ၊ အရသာမြည်းကြည့်ပြီးလိုနေလျှင် ထပ်ထည့်ပါ။ (အရသာကို မိမိအကြိုက်လိုတိုး၊ ပို့လျှော့ လုပ်ပါ)
.. Spring roll wrapper ကို အာလူးနယ်ထားသောအစာထည့်ကာ ခေါက်ပါ။ နောက်ဆုံးအပိုင်းမခေါက်မီ ကော်သုတ်ဖို့ မမေ့ပါနှင်။စမူဆာအားလုံကို ပြီးအောင်အရင်ခေါက်ထားပြီးမှ ကြော်ပါ။ နောက်မို့ဆို စမူဆာခေါက်ရင်း၊ ကြော်ရင်း တူးသွားတတ်လို့ပါ။
.. မီးအနေတော်တွင် ဒယ်အိုးတည်ပြီး စမူဆာမြုပ်သည်အထိ ဆီထည့်ပါ။
.. ဆီကျက်လျှင် ခေါက်ထားသော စမူဆာများကို ဆီထည့်ပြီးကြော်ပါ။အပေါ်အောက်လှန်ပေးပြီး အညိုရောင်သန်းလာရင် ဆယ်လို့ရပါပြီ။
..ဒါဆိုရင်တော့ ကြွပ်ကြွပ်မွှေးမွှေး စမူဆာလေး ရပါပြီ။
စမူဆာ၊ ကြက်သွန်နီဆီချက်ထားတာ၊ ပူဒီနာ(ပူစီနံ)ရွက်၊ကြက်သွန်နီ အကွင်းလိုက်လှီးထားတာ၊ ဂေါ်ဖီပါးပါးလှီးထားတာ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ပါးပါးလှီးထားတာ ရယ်ကို ၊ သံပုရာရည်၊ မန်ကျည်းရည်ညှစ်ပြီး အချိုမှုန့်၊ ဆား၊ မဆလာ ထည့်နယ်ပြီးသုပ်ရင် သက်သက်လွတ်ဟင်း တစ်ခွက် အဖြစ် စမူဆာသုပ်ရပါတယ်။
ဆိုင်တွေမှာစားတဲ့ ကုလားစမူဆာသုပ်ဆို ပဲစိမ်းမှုန့်လေးကို ဆား၊မဆလာ၊နနွင်းမှုန့်ထည့်ပြီး ရေနဲ့ကျို၊ကုလားပဲ အခွံမချွတ်ရသေးတာကို တစ်ညရေစိမ်ပြီးပြုတ်၊ အာလူးအလုံးသေးသေးလေးတွေပြုတ်ထား၊ ပြီးရင် အားလုံးကို ရောမွှေပြီး သုပ်ပေတော့။ ရှူးရှဲလေးဖြစ်အောင် ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့်လေးပါထည့်၊ အပေါ်က ပူဒီနာ(ပူစီနံ)ရွက်၊ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်ကလေး ဖြူးထည့်ရင်မွှေးမွှေးစပ်စပ် စမူဆာသုပ်လေးရပါပြီ။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ ထိုင်သာ မြည်းပေတော့ ။ လွှတ်ကောင်းမှာ ဗျို့ .....